Waa Kuwan Magacyada AFAR Ciyaaryahan Oo Ay Real Madrid Miiska Usoo Saartay Man United Si Ay Paul Pogba Uga Hesho - Miyay Qancin Karaan? - Gool24.Net
Kooxda Real Madrid ayaa u muuqata mid ay ka go’antahay inay gacanta kusoo dhigto khadka dhexe ee Man United ee Paul Pogba iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya saxaafada England ay sheegayso inay miiska soo saartay afar ciyaaryahan.
Tababaraha Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa aad ula dhacsanaa mudo dheer Paul Pogba oo inta badan xilli ciyaareedkan dhaawacyo kusoo noq-noqday oo canqawga ah ku seegay kulamada kooxdiisa.
Si kastaba, Madrid ayaa wali xiisaynaysa inay isaga la saxeexato waxaana ay miiska usoo saareen Manchester afarta ciyaaryahan ee kala ah James Rodriguez, Lucas Vazquez, Martin Odegaard iyo Brahim Diaz sida uu sheegayo wargeyska The Sun.
Real Madrid ayaa xiisaynaysa inay suuqa xagaaga la wareegto ciyaaryahanadii qorshaheeda kusii jiray balse iyadoo uu hoos u dhac dhaqaale keenay caabuqa Korona darteed ayay ku dedaali doonaan heshiisyada ciyaartoy isku bedelashada ah.
James ayaan marnaba isku soo hoos muujin tababare Zidane tan iyo markii uu kooxda qabsaday sanadkii 2016 halka Martin Odegaard oo ay isaga oo 16 sano jir ah lasoo wareegeen uu amaahdii saddexaad ugu maqan yahay Real Sociedad.
Lucas Vazquez ayaa kasoo baxay akaademiga Real ahna ciyaaryahan uu shaqsiyan ciyaartiisa u jecel yahay Zidane halka Brahim Diaz ay bishii January ee 2019 kala saxeexdeen Man City
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in tababaraha Man United ee Ole Gunnar Solskjaer uu isagu doonayo inuu dib ugu soo shirtago Pogba isla markaana uu shaxdiisa soo geliyo marka ay ciyaaruhu dib u bilaabmaan.
Ugu dambayn, Pogba ayaa tan iyo bishii September ee sanadkii hore ciyaaray kaliya laba kulan balse mudo dheer oo ay haatan kubadda cagtu maqnayd ayuu kaga soo kabtay qaliinkii canqawga lagaga sameeyay bishii January.